UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay hoobiyeyaal lagu garaacay dhismaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay hoobiyeyaal lagu garaacay dhismaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa goor-dhow maanta tiro madaafiic ah lagu garaacay nawaaxiga xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, sida Halqaran.com ay u xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Madaafiicdan oo jugtooda la maqlay ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegayaan qaarkood inay ku soo dhaceen Xaafadda Cagadhiig ee Degmada Wardhiigley iyo Xaafadaha kale ee ku dhaw.
Wararka qaar ayaa sheegaya in hoobiyeyaasha qaarkood ay ku dhaceen dhismayaal ku yaallo gudaha Madaxtooyadda Soomaaliya, inkastoo illaa hadda si rasmi ah aanan loo xaqiijin karin meesha ay kaga dhaceen Madaxtooyadda gudaheeda.
Dadka ku nool Xaafada Cagadhiig ayaa sheegay mar kaliya inay dareemeen argagax xoogan oo ku aadan hoobiyeyaasha soo dhacay, islamarkaana ay ku carareen dhismayaasha dabaqa ah si ay ganbaad uga dhigtaan.
Ilaa iyo hadda rasmi ah looga oga halka laga soo tuuray hoobiyeyaashaan, balse Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano iyo baadigoobka meesha Hoobiyeyaasha laga soo ganay.
Madaxtooyada Villa Soomaaliya